Russie 2018 : Nalalaka ny lalan’i Bresil hiatrika ny ampahefa-dalàna -
AccueilVaovao SamihafaRussie 2018 : Nalalaka ny lalan’i Bresil hiatrika ny ampahefa-dalàna
03/07/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Na dia nampitaintaina ihany aza, nalalaka ny lalan’i brésil hiatrika ny ampahefa-dalàna. Lavon-dry Neymar sy ny ekipany tamin’ny isa 2 no 0 i Mexique omaly tamin’ny lalao fahatelo tamin’ny ampahavalon-dalàna. Anisan’ireo ekipa goavana tafita amin’ny dingana manaraka araka izany i Brésil raha saika lavo tany amin’ny fifanitsanana sy ny ampahavalon-dalàna ireo noheverina ho andrerezina tamin’ity fiadiana ny amboara eran-tany any Russie ity. Anisan’izany ry Allemagne, Portugla, Espagne, ary Argentine. Izay mivoaka mpandresy eo amin’ny fihaonan’i Belgique sy Japon no hifandona amin’i Brésil amin’ny dingana manaraka. Anio no ho fantatra ireo ekipa 2 farany hiatrika ny ampahefa-dalàna miaraka amin’i Uruguay, Franysa, Russie mpampiantrano ary Croatie.
Tany amin’ny minitra faha-51 vao nahita lavaka tao amin’ny vodumaharana meksikana ry zareop breziliana ary ny lohan’i Neymar no nanakobana ny harato. Teo amin’ny minisitra faha-88 kosa ny baolina faharoa nampidirin’i Roberto Firmino. Anisan’ireo ekipa nitondra endrika hafa tamin’ity Mondial ity ry zareo meksikana izay nahazo fandresena roa nanoloana an’i Allemagne sy Corée du sud tany amin’ny lalao isam-bondrona, ary lavon’i Suède tamin’ny 3-0.
6 ora : Suède – Suisse
10 ora : Colombie – Angleterre
Tsy ny fisian’ny mpanenjika no tsy hanatanterahana ny asa raha ny nambaran’ny Filoha nandritra ny kabariny omaly tetsy Andohatapenaka. Asa fanasoavana ny firenena no atao, ary ny vahoaka no atao laharam-pahamehana amin’ny asa rehetra atao. ...Tohiny